इटहरीका मेयरद्वारा स्कूलको छड्के चेकह – Purbihotline
इटहरीका मेयरद्वारा स्कूलको छड्के चेकह
इटहरी/इटहरी उपमहानगरका मेयर द्वारिकलाल चौधरी मंगलबार बिहान साढे ११ बजे इटहरी खनारस्थित शारदा उच्च मावि पुगे । सरासर कक्षा ९ मा गए । एक जना शिक्षिका विज्ञान विषय पढाउदै थिइन् । एक जना विद्यार्थीलाई उनले ज्द्दण् (एचटुओ) भनेको के हो ? सोधे । विद्यार्थीले पानी भने धन्यवाद भने ।
मेयरले अजघ (सिएच थ्री) भनेको के हो ? अर्का विद्यार्थीलाई सोधे । विद्यार्थी अकमकाए । शिक्षिकाले भने सर यो पाठ त पढाएकै छैन । मेयर चौधरीले विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको हाजिरी नीरिक्षण गरे । दशकक्षा सम्म ८ सय ५ जना विद्यार्थी रहेको सो स्कुलमा २५ जना शिक्षक कर्मचारी रहेकोमा दुई जना विदामा र एक जना अनुपस्थित रहेको पाइयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमलप्रसाद सापकोटाले जानकारी गराएरै एकजना अनुपस्थित रहेको बताए । सो स्कुलमा तीन दिन अघिमात्र विद्युतीय हाजिरी सुरु गरेको पाइयो ।
शारदा उच्च मावि खनारको छडके नीरिक्षण पछि मेयर चौधरी इटहरीकै पुरानो जनता स्कुलतर्फ लागे । स्कुल प्रवेश गर्ने ठाँउमा स्लाव बनाएर अपाङ्गतामैत्री बनाइएको पाइयो । विद्युतीय हाजिरी र सीसी क्यामरा प्रयोग गरेको र विद्यार्थीहरुको मूल्याँकन गर्ने गरिएको पाइयो । त्यहाँ ३२ जना शिक्षक भएकोमा दुई जना काजमा र तीन जना विदामा पाइयो । जनता स्कुलको पनि कक्षा ९ मा प्रवेश गरेर मलाई जान देउ लाई अग्रेजीमा भन त भनेर सोध्नुभयो तर कुनै पनि विद्यार्थीले सहि जवाफ दिन सकेनन् । जनता माविको एउटा कक्षामा स्कुलका ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काँशीनाथ दंगाल स्वयम पनि १० कक्षामा पढाउदै गरेको भेटिए । उनका अनुसार विद्यालयमा शिक्षक अनुपस्थित भएका बेला कक्षा खाली हुन नदिने गरिएको छ । विद्यार्थीहरुले फुर्सद नाम गरेको एउटा कापी ल्याउदा रहेछन् । जसमा कुन दिन कुन शिक्षक कक्षामा आएनन् मिति सहित लेखेर आफूले त्यो खाली रहेको कक्षामा के पढेको हो त्यो फुर्सद कापीमा उल्लेख गनुपर्ने र त्यो कापी विद्यालय ब्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दंगालले मात्र चेक गर्दारहेछन् ।
इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले इटहरीका विद्यालयहरुको छडके नीरिक्षण जारी राख्ने बताए । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि छडके नीरिक्षण थालेको जनाए । (श्रीजनमत साप्ताहिक वाट)
← सबैभन्दा धेरै उपाधि जित्ने खेलाडी हुन् लियोनेल मेस्सी
कप्तान खड्काले गरे इटहरी स्थित इनडोर क्रिकेट ट्रेनिङ हलको निरिक्षण →